सिरहामा एसइइ परिक्षा अमर्यादित बनाउने को हुन् ? | रेडियो फूलवारी १०५.४ मेघाहर्ज
Home मुख्य समाचार सिरहामा एसइइ परिक्षा अमर्यादित बनाउने को हुन् ?
जिल्ला शिक्षा अधिकारी अरविन्दलाल कर्णले मावि ब्रहमाण गोर्छारी केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष रामभजन साहलाई सचेत गराउँदै ।
लहान । गत वर्ष देखि एसएलसीको ‘रिजल्ट’ अंकबाट लेटर ग्रेडिङ्ग प्रणालीमा गयो । यस वर्ष देखि एसएलसीलाई रुपान्तरित गरी एसइइ परिक्षा भनेर सुरु भएका छन् । यी दुई कुरा फेरिए पनि परिक्षामा चिट चोराइने कुरा फेरिएको छैन् ।
चिट चोराउनलाई सहज वातावरण बनाउन निजी विद्यालयले पैसा खर्च गर्न पछि हटदैन । कतिपय केन्द्राध्यक्षले पैसा लिएर त्यस्तो वातावरण पनि बनाइ दिन्छन् । तर, जिल्लाको परिक्षा अनुगमन टोलीले केन्द्राध्यक्षको ‘चिट चोरी खेल’ रोक्ने प्रयास गरेकै हुन् । त्यही भएर सिरहामा गत वर्ष एसएलसी परिक्षा चिट चोरी र अमार्यादित कार्य गरेको भन्दै पाँच जनालाई केन्द्राध्यक्षको ‘ब्लायाक लिष्ट’ मा राख्यो । दर्जनौँ नक्कली निरिक्षकलाई पक्राउ गरी कारवाही गरेका छन् । अहिले दिनहु जसो केन्द्राध्यक्षहरुलाई सचेत गराइरहेका छन् । नक्कली निरिक्षकलाई पक्राउ र निष्काशित गर्दै छन् ।
मंगलवार शिक्षा अधिकारी अरविन्दलाल कर्ण परिक्षा अनुगमनको क्रममा ब्रह्माण गोर्छारी परिक्षामा पुगेका थिए । शिक्षा अधिकारीको टोलीले त्यहाँ तिन मोबाइल, दुई बोरा चिट र उतर लेखिएका ‘फल्याप’ फेला पारे । परिक्षार्थीहरुले परिक्षा हलभित्रै मोबाइल लिएर गएका थिए । बरामद गरिएका मोबाइल निजी विद्यालयका विद्यार्थीका हुन् । सोमवार पनि पडरिया थारुटोलबाट केही थान मोबाइल बरामद गरिएको शिक्षा अधिकारी कर्णले सुनाए । कसरी मोबाइल ? र यत्रो चिट कक्षाकोठा भित्र चिर्छ शिक्षा अधिकारी प्रश्नमा केन्दाध्यक्ष रामभजन साहले जवाफ दिन सकेन् । यस वर्ष गेटमा पनि विद्यार्थीको सर्च केन्द्राध्यक्षले खटाएको व्यक्तिले मात्रै गर्छ । प्रहरीलाई अधिकार नदिएको बुझिएको छ ।
परिक्षा निर्देशिका २०७३ अन्तर्गत परिक्षा अनुशासन पालनका लागि केन्द्राध्यक्षका लागि जारी गरिएको १९ बुँदे निर्देशन विपरित अमर्यादित क्रियाकलाप गरेको भन्दै परिक्षा अनुगमन समितिले केन्द्राध्यक्षहरुलाई सचेत र निरिक्षकलाई परिक्षा केन्द्रबाटै निष्कासन गरेका छन् । शिक्षा कार्यालय सिरहाका अनुसार परिक्षार्थीलाई गेसपेपर र परिक्षा केन्द्र बाहिरबाट तयार पारिएको फ्ल्याप उत्तरपुस्तिकामा सार्ने वातावरण सिर्जना गरेर परिक्षा अमर्यादित केन्द्राध्यक्ष र निरिक्षकले बनाएको छ ।